Meet the militant monk spreading Islamophobia in India. ဟိန္ဒူ လူဆိုး ၁၀၀ မွေးထုတ်ရမယ် ဟိန္ဒူ လူ၁၀၀ က ယုတ်မာပေးရမယ်တဲ့ ဝီဝီ့ လို စိတ်ဓာတ်မျိုးဘဲ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMeet the militant monk spreading Islamophobia in India. ဟိန္ဒူ လူဆိုး ၁၀၀ မွေးထုတ်ရမယ် ဟိန္ဒူ လူ၁၀၀ က ယုတ်မာပေးရမယ်တဲ့ ဝီဝီ့ လို စိတ်ဓာတ်မျိုးဘဲ
Meet the militant monk spreading Islamophobia in India. ဟိန္ဒူ လူဆိုး ၁၀၀ မွေးထုတ်ရမယ် ဟိန္ဒူ လူ၁၀၀ က ယုတ်မာပေးရမယ်တဲ့ ဝီဝီ့ လို စိတ်ဓာတ်မျိုးဘဲ
ဟိန္ဒူ လူဆိုး ၁၀၀ မွေးထုတ်ရမယ်
ဟိန္ဒူ လူ၁၀၀ က ယုတ်မာပေးရမယ်………တဲ့
ဝီဝီ့ လို စိတ်ဓာတ်မျိုးဘဲ
“If [Muslims] take one Hindu girl, we’ll take 100 Muslim girls. If they kill one Hindu, we’ll kill 100 Muslims.”
– Hindu monk Yogi Adityanath
(Another Fascist, misogynist thuggish demagogue inareligious garb).
Yogi Adityanath, the new chief minister of the Indian state of Uttar Pradesh, speaks duringanews conference on Sunday in Lucknow, India. (European Pressphoto Agency)
By Nilanjana Bhowmick March 24
← ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအချက်အလက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ စေလွှတ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနက ဒီကနေ့ ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုပယ်ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်ကွဲပြားမှုတွေရှိနေတာကို မဇ္ဈိမက မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်
Please don’t makeafist when I extend my hand to shake hands… →